Hafatr’i Rosia Ho An’ireo Tranonkala Afaka Manafina Anarana : Akatony ny Vava Dia Ndeha Mandeha · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 29 Jolay 2015 7:07 GMT
Mamoritra amin'ny fomba ofisialy ny tsy fitononana anarana ety anaty aterineto i Kremlin. Sary an'i Tetyana Lokot.
Ofisialy izao ny famoretan'i Rosia ireo tolotra tsy fitononana anarana ety amin'ny tranonkala— fitaovana izay ahafahan'ireo mpampiasa azy mijery votoaty na tranonkala mety ho voabahana ao Rosia. Nampidirin'ny Roscomnadzor, mpanivana aterineto ao Rosia, ho ao anatin'ny rejisitra maintiny ny tolotra NoBlock ahafahana manao izany.
Fanakanana nipoitra taorian'ny famoahana didy avy amin'ny fitsarana iray ao Anapa milaza fa azo ampiasaina hidirana amin'ireo votoaty izay nampidirina tany aloha ho ao anaty lisitry ny antontan-kevitra fampihorohoroana. Ilay didim-pitsarana tany amin'ny 13 Aprily 2015 dia milaza fa “amin'ny alàlan'ny fiafenana sy fanakonana ny IP dia manome fahafahana feno ny mpampiasa aterineto ny NoBlock mba ho afaka miditra amin'ireo tranonkala rehetra nobahanana.”
Io fitsarana ao Anapa io ihany koa no mbola nisahirana tany amin'ny volana Aprily, nanakana roa hafa tranonkala mpanafina anarana, niaraka tamin'ny didy dika mitovy tsy misy hafa amin'ilay iray tetsy ambony, saingy tsy mbola nampidirina ho ao anatin'ny rejisitra misy ireo tranonkala bahanan'i Roscomnadzor ireny tranonkala ireny. Fitsarana Rosiana maro hafa, isan'ireny ny ao Bashkortostan sy Dagestan, no namoaka didy ihany koa hibahanana ireo mpanafina tranonkala ireo, saingy tsy nanome ny adiresy IP voafaritra mazava tsara momba ireo tranonkala bahanana kosa ireo didim-panjakana ireo.
Tamin'ny May, RosKomSvoboda, fikambanana Rosiana iray momba ny fahalalahan'ny Aterineto sy ny Zon'Olombelona, dia nitatitra hoe tena io fitsaràna ao Anapa io ihany koa no namoaka didy hibahanana ny tranonkalan-dry zareo tamin'ny filazàna fa tranonkala mpanafina anarana koa io pejy resahana io. Raha ny marina, ny ampahany monja amin'ilay tranonkala izay ny RosKomSvoboda no tompony dia nanome torolàlana momba ny fomba atao mba handinganana ireo fibahanana miainga avy amin'ny fijerena ny toerana sy ny fidirana amin'ireo tranonkala tafiditra lisitra mainty ao Rosia.
Tena mendrika homarihana ny hoe saika ao anatin'ireo didy rehetra mihitsy, nitanisa lalàna manankery saingy tsy natao manokana ho an'ny tolotra fanafenana anarana ety anaty aterineto ny fitsaràna, toy ilay lalàna momba ny asa fampihorohoroana. Nefa koa, ny zava-misy hoe nampiasa ny famaritana ‘mpanafina’ ho toy ny antony ibahanana tranonkala ny fitsarana, dia efa zavatra mampiasa loha, satria ireo mpanafina, ireo proxy-servers, sy ireo fitaovana hafa dia tsy voatondro mazava sy mivantana hoe voasakana ao Rosia.
Efa elaela ihany no niady hevitra momba ny fameperana ny VPN sy ny tranonkala mpanafina anarana ireo Rosiana manampahefana. Tamin'ny 2013 ny media Rosiana dia nitatitra fa nihevitra ny hanisi-kevitra ao amin'ny Duma-mpanjakàna ny Federal Security Service (FSB) mba hanaovana tolodalàna iray handraràna ny “Tor sy ireo proxy servers hafa mpanafina anarana,” saingy tsy tafavoaka mihitsy tao amin'ny kaomisiôna ilay hevitra. Tamin'ny Febroary 2015, Leonid Levin, solombavambahoaka mitarika ny kaomisiôna parlemantera momba ny politikan'ny fampitam-baovao sy ny fifandraisana, dia nanolo-kevitra hoe nila nasiana fepetra ny fidirana amin'ireo fitaovana fanafenana sy fandinganana toy ny Tor, VPNs, ary proxy-servers.
Tamin'ny 2014, nampilendalenda efa ho 4 tapitrisa robla (100.000 dolara amerikana eo) ny Minisitry ny Atitany Rosiana ho an'izay olona afaka mahita fomba iray hamahàna ireo angon-drakitra alefa amin'ny alàlan'ny tambajotra Tor. Tena vao haingana mihitsy, ity Jolay ity, nitatitra ireo media Rosiana fa nampanao fandalinana momba ny mety ho “fahafahana misarika ny fivoaran'ny ampahan'ny aterineto Rosiana” i Kremlin, tafiditra amin'izany ny fitadiavana fomba hisorohana ny asa miafina atao ety anaty aterineto sy ny famokarana fomba handrindràna sy hanivànana ny vaovao alefa amin'ny fomba tsy mitonona anarana, ny fandalinana ireo fomba fanafenana, ary ny fanarahana maso ireo fivezivezena misy mari-pamantarana.
Ny fandalinan'ny RuNet Echo manokana dia mampiseho fa niakatra be ny fampiasàna Tor tao Rosia, toy ny ho valinkafatra amin'ireo ezak'i Kremlin handrindra na hanivana ireo votoaty ety anaty aterineto. Na ny tatitra iray vao haingana aza, avy amin'ny Mpitondra teny manokan'ny Firenena Mikambana momba ny Fampiroboroboana sy Fiarovana ny Zo hanana Fahalalahana Miteny sy Maneho hevitra, dia manaiky ny fisian'ireo fitaovana fametrahana mari-pamantarana sy fiafenana ho toy ny “zava-dehibe ho an'ny fahalalahana maneho hevitra,” toa fanirian'i Kremlin ny haneritery ny fampiasàna rindrambaiko izay manamora ny tsy fitononana anarana sy ny fahalalahana maneho hevitra ety anaty aterineto.